७.३ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गयो,१४१ को मृत्यु,पराकम्पनले मानिसहरुमा त्रास ! | Arthatantra.com
७.३ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गयो,१४१ को मृत्यु,पराकम्पनले मानिसहरुमा त्रास !
तेहरान । इराक र इरानको पश्चिमी केरमनसा प्रान्तमा आइतबार राति गएको भूकम्पमा परी कम्तीमा १ सय ४१ जनाको मृत्यु भएको समाचार छ । उक्त क्षेत्र इराक इरानको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ । उक्त क्षेत्रका साथै कुवेतमा पनि भूकम्पको धक्का महसुश भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । मृत्यु हुनेमा अधिकांश इरानी छन् ।
उक्त भूकम्पमा परी इराकमा पनि ६ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ । भूकम्प ७.३ म्याग्निच्युड मापन गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
भूकम्पको केन्द्रविन्दु कुर्द नजिकैको सहर हलब्जामा रहेको छ । इरानको इतिहासका धेरै शक्तिशाली भूकम्पहरुमा यो पनि शक्तिशाली भूकम्प रहेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
सो शक्तिशाली भूकम्पले इरानको पश्चिमी क्षेत्रमा थुप्रै नागरिक घाइते भएका छन् । अधिकारीहरुले सोमबार बिहानसम्ममा घाइते हुनेको सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी नै रहेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
भूकम्पको उद्वारका काममा खटिरहेको उद्वारकर्मी र अधिकारीहरुले सञ्चारमाध्यमहरुलाई बताएअनुसार मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्नसक्ने जनाइएको छ । भूकम्पले कैयौँ घर भत्किएका छन् । भत्किएका भवनहरुको भग्नाबशेषबाट केहीलाई निकालिएको छ भने अरु केही अझै पनि पुरिएर रहेका छन् ।
इरानको रेड क्रिसेन्ट संस्थाले सो भूकम्पबाट विशेषगरी इरानतर्फका आठवटा गाउँमा बढी नै क्षति भएको जनाएको छ । साथै अरु पनि कैयौं गाउँ र सहरहरुमा विजुली आपूर्ति बन्द भएको छ भने सञ्चार सेवा अवरुद्ध छ ।
भूकम्पले बाटोमा समेत क्षति पुगेको छ । बाटो अबरुद्ध नै भएको छ । कतिपय स्थानमा भास्सिएको छ भने केही ठाउँमा पहिरोले आवतजावत नै बन्द गराएको छ । यसका कारण उद्धार टोलीहरुलाई क्षतिग्रस्त स्थानमा पुग्न गाह्रो भएको बताइएको छ ।
भूकम्प लगत्तै अत्तालिएर घरबाहिर सडकमा निस्किएका मानिसहरु अहिलेसम्म पनि घरभित्र पस्न सकेका छैनन् । बारम्बारको पराकम्पनले उनीहरुमा त्रास फैलिएको बताइएको छ ।
मानिसहरु सडकमा भेला भएर बसेका छन् । पराकम्पन आउनसक्ने डरले उनीहरु घरमा फर्किन सकेका छैनन् । उता कुवेतमा पनि यस्तै अवस्था रहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा राखिएका तस्वीरहरुमा कुवेतीहरु पनि पराकम्पनको त्रासले बाहिर सडकमै बसिरहेको देखिन्छ ।
तर कुवेतबाट क्षतिको अवस्थाको बारेमा भने केही जानकारी हुन सकिरहेको छैन ।(रासस/सिन्ह्वा)